‘Yoo filannoo dhugaa gaggeessina ta’e marii dhugaa nu barbaachisa’- KFO – Kichuu
HomeAfaan OromooNews‘Yoo filannoo dhugaa gaggeessina ta’e marii dhugaa nu barbaachisa’- KFO
Haala siyaasaa Itoophiyaa keessa yeroo amma jiru ilaalchisuun ibsa kan baase Paartiin Kongireesii Federaalawaa Oromoo (KFO), balaa sodaachisaa biyyattii mudachuu malu hambisuuf marii dhugaarratti hundaa’etu barbaachisa jedhe.
(bbcafaanoromoo)–Mata-duree ‘Marii Dhugaa Biyyaalessaa Bara Haaraa’ jedhuun ibsa baase keessatti marii dhugaaf waamicha dhiyeesseera paartiin kun.
Hoogganaan Liigii Dargaggootaa KFO Obbo Addisuu Bullaalaa, waamichi kun kan barbaachiseef bara haaraa kanatti filannoon ni gaggeeffama jedhamee waan jiruuf sanaaf ammoo walii galteen biyyaalessaa waan barbaachisuuf jedhan.
‘’Yoo dhugumaan ga’een paartileen qaban kan itti amanamu ta’e, nageenyi dhufee uummanni tasgabbaa’ee ce’umsi gara dimokiraasiitti taasifnu yoo dhugaan kan barbaadamu ta’e jenneetu mootummaaf waamicha kana dhiyeessine,’’ jedhan Obbo Addisuun.
Paartiin KFO yeroo hedduu marii dhugaafi haqaa jechuun irra deddeebiin kan kaasu marii yeroo ammaa biyyattii keessatti gaggeeffamurraa akkamiin adda ba’a, akkamiin ammoo argamuu danda’a kan jedhuuf Obbo Addisuun wayita deebii kennan, “Mariin dhugaa haqa uummataafi dhugaa biyya kana keessa jiru saalfii tokko malee waliin dubbannee dhugaarratti walta’uu qabna kan jedhuudha,’’ jedhan.
Fakkeessaafi gowwoomsaan uummata sobanii biyya kana ceesisuun hin danda’amu kan jedhan Obbo Addisuun, “Osoo uummanni sababa siyaasaafi ilaalcha dhugeeffannaasaatiin adamsamee hidhamuu, osoo paartileen siyaasaa adamsamanii, bakka qabeenyi uummataa qisaasamaafi saamamaa jirutti mootummaan pirojektoota mimmiidhagoo namoota muraasa fayyadan ijaaranii qofa jilliifi bashannanni halkaniifi guyyaa geggeeffamu ce’umsa hin fidu,’’ jedhan.
Ibsa paartiin KFO baase keessatti ‘balaa sodaachisaa’ kan jedhu irra deddeebiin ka’eera, kana maalirraa kaatanii jettan jennee Obbo Addisuu gaafanneerra.
‘’Uummanni biyya kanaa yeroo kamiyyuu caalaa qaamolee mootummaa seera baasan, hojjiirra oolchaniifi hiikan irraa abdii kutatee jira. Haqi uummataa mana murtii keessa, siyaasa keessa osoo hin taane afaan qawweetti deebi’ee jira,’’ jechuun sodaa qaban ibsan.
Kun mataansaa uummata abdii kutachiisee osoo jiruu warri sirna durii leellisan ammoo Oromummaa cabsuuf socho’aa jiru jedhan Obbo Addisuun.
Duulli kun miidiyaas ni dabalata kan jedhan qondaalli KFO kun, hunda caalaa ammoo namoota mataa Oromoo ta’an kan Oromoon akka ijasaatti ilaalu wayita ajjeefamaniifi hidhaman argaa jirra jedhan.
Keessattuu namoonni duree Oromoo ta’anii qabsoo ce’umsa kana fide finiinsaa turan amma mana hidhaa buufamanii irratti dhaadatamaa jira jedhan.
Kun hundi yaaddoo walitti bu’iinsa sabaa fiduu danda’a jennee yaadna jedhan Obbo Addisuun.
Kana hundaaf falli guddaan garuu yoo dhugaadhaan filannoo dimokiraatawaafi haqa-qabeessa gaggeessuun barbaachise qaamoleen dhimmi ilaallatu hundi waliin taa’anii marii dhugaa mari’atanii rifoormii dhugaa fidanii waliin deemuu qabu jedhan.
Kanaan alattimmoo afaan qawweetiin walitti geeraruufi wal-gaarreffachuun goolama hamaa yoo fide malee furmaata hin ta’u jedhan.
KFO’n marii torbee darbe keessa paartileen siyaasaa naannolee Oromiyaafi Amaaraa waliin mari’atan irratti akka hin hirmaanneefi walii galteen irra ga’ame jedhames akka isa hin ilaallanne ibsee ture.
Dubbii Himaan paartii biyya bulchu, Paartii Badhaadhinaa, Biqilaa Hurrisaa (PhD) mariin akkanaa rakkoo yeroo ammaa biyyattii harkaa qabuuf furmaata ijoodha jedhan.
Turtii BBC waliin taasisaniin Biqilaan (PhD)n dirreen dimookiraasii yeroo jijjiiramaa dhufe ”Karaa of eeggannoofi itti-gaafatamummaa qabuun fayyadamuurratti hanqinni tokko tokko ture jira,” jedhan.
Mootummaan dirree siyaasaa bal’isuuf karaa dheeraa akka deemeefi kana irrattis bu’aa qabatamaa akka fidee ture kan ibsan Dr. Biqilaan, dirree siyaasaa bal’isuun murannoofi carraaqqii mootummaa qofa osoo hin taanee gahee qooda fudhattootaa hundaa barbaadas jedhan.
Itti-Gaafatamaan Waajjira KFO Obbo Xurunaa Gamtaa ammoo marii sanarratti yeroo lamaa sadi hirmaatanii bu’aa uummataaf buusuu waan hin dandeenyeef akka keessaa ba’an dubbatan.
Ammammoo KFO’n mariin dhugaafi haqa qabeessi akka barbaachisu leellisaa jira.